वयस्क पीसी खेल – खेल निःशुल्क XXX अनलाइन खेल
खेलाडी रही वृद्ध र अधिक "महिला"
खेल अधिवेशन व्यापार मेला देखि उत्प्रेरित गरेको छ लियपजीग गर्न कोलोन. मा 1,20,000 वर्ग मीटर गर्न अर्को राइन, मान्छे देख्न सक्छौं कि सबै कम्प्युटर freaks को सपना. हरेक चौथो जर्मन खेल मा एक कम्प्युटर र यसरी प्रोत्साहन को बिक्री adult PC games. पहिलो आधा मा, यस वर्ष को 24.8 मिलियन adult PC games बेचे थिए । तापनि गिरावट बिक्री, संयुक्त राज्य अमेरिका मा कम्प्युटर खेल उद्योग राम्रो गरिरहेको छ, जर्मनी मा - यो देखेको छ, एक दुई प्रतिशत वृद्धि मुनाफा गत वर्ष तुलना. हामी विश्वास छैन कि हामी देख्न हुनेछ एक ड्रप मा बिक्री अर्को वर्ष, हामी यो हुनेछ लाग्छ बढ्न गतिशील., हामी पहिले नै निराश संग मध्यम वृद्धि यस वर्ष । अन्य देशहरू तुलना, जर्मन, अझै पनि राम्रो गरिरहेको, तर तिनीहरूले खुसी हुनेछ कल्पना गर्न डबल अंकको वृद्धि अर्को वर्ष ।
वयस्क पीसी खेल भएका छन्, सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष को वयस्क संस्कृति
अनुमान अनुसार, 2020 मा, को मुनाफा देखि कम्प्युटर खेल सफ्टवेयर विश्वव्यापी राशि भन्दा बढी 40 अर्ब डलर छ । कारण यस्तो एक उछाल थियो नयाँ कुराहरू 2019 मा. 2019 मा, हामी वृद्धि गर्न धन्यवाद मोबाइल गेमिंग कंसोलका । त्यो बाटो, यो निर्माताहरु सक्छ खुसीसाथ अन्त 2019. यो प्रवृत्ति जारी मा 2020. यो विशेष गरी सजिलै देखिने औसत उमेर को प्रयोगकर्ता वृद्धि । वयस्क पनि माथि गदगद लागि वयस्क पीसी मा खेल, भर्चुअल अन्तरिक्ष छन्, र अधिक र अधिक महिलाहरु तिनीहरूमध्ये. हामी निम्न छन् एक प्रवृत्ति को क्षेत्र मा लक्ष्य समूह अब केही समय को लागि., यसको मतलब यो हो कि खेलाडी छन् आंशिक पुरानो रही र अधिक 'स्त्री'. हरेक तेस्रो खेलाडी महिला छ, र सबैभन्दा महिला खेलाडी हुन सक्छ रूपमा वर्गीकृत आकस्मिक खेलाडी । भनेर हामीलाई देखाउँछ कि आधा खेलाडी को हो, आराम । कम्प्युटर खेल मा निष्पक्ष कोलोन को हेरविचार लिन्छ समसामयिक र नियमित खेलाडी' सन्तुष्टि प्राप्त गर्न छ - अधिक ठीक, 420 exhibitors देखि 30 countries.
भिडियो खेल भएको छ, हाम्रो जीवन को एक भाग दशकहरूमा लागि. तिनीहरूले लामो को एक अनिवार्य भाग भएको, लोकप्रिय संस्कृति प्रदान मनोरञ्जन लागि दुवै बच्चाहरु र वयस्क. सुरुमा, तिनीहरूले छलफल गरेका थिए भन्ने कुरा प्रयोग गर्न सकिन्छ कान्छो मान्छे को लागि, तर पुस्तामा को गम्भीर gamers भएका छन् मुख्यतः आमाबाबुले. यसको विपरीत मा, तिनीहरूले विकसित देखि एकदम को शुरुवात कम्प्युटर र पहिलो संस्करण को शान्ति. आफ्नो महत्त्व बढेको छ, यो बिन्दु पहिले नै छन् भनेर बहस आज कि बारे, सबै भने, त्यसपछि कम से कम तिनीहरूलाई केही छलफल गर्न सकिन्छ कला । , दिन को pixelated स्क्रीन र सीमित midi आवाज छन्, लामो-खडा सम्झनाहरु । प्रविधि अग्रिम रूपमा, तेजी भिडियो खेल तिनीहरूलाई पालन, यो कदम द्वारा कदम, र आफ्नो भर्चुअल वास्तविकता हुन्छ जस्तै अधिक र अधिक वास्तविक जीवन ।
उद्योग वृद्धि मा अन्तिम दुई दशक, भेला कठोर प्रशंसक विश्वव्यापी र रेकर्डिङ भीषण आय, जबकि हामी झन् हेर्नुभयो हलिउड फेंक मा नै adaptations को सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू लागि cinemas. Adult PC games लामो भएको मुख्यधारा, तर आफ्नो ठाउँ देखिन्छ अधिक महत्वपूर्ण कहिल्यै भन्दा नयाँ वास्तविकता छ । मानौं, कुनै छ कुनै पनि लाभ उठाउन coronavirus महामारी फैलिएको छ कि विश्वव्यापी र बन्द मा हामीलाई हाम्रो घर । कि मामला मा, यो भिडियो खेल उद्योग आवश्यक छैन जन जमघट भौतिक संसारमा जब सबै कुरा मा ठाँउ लिन्छ भर्चुअल., घन्टा हजारौं र हजारौं जलाइएको एक कम्प्यूटर को सामने संग शीर्षक को विभिन्न विधाहरू कि केहि प्रदान गर्न सबैले देखि - महाकाव्य gangbangs, कट्टर BDSM, cumming मुख enchanting पानी खेल खेल थिए आदर्श नुस्खा लागि संगरोध.
त्यसैले यो कुनै आश्चर्य छ कि वैश्विक भिडियो खेल उद्योग गर्न अनुमान गरिएको छ छ कमाएका बारेमा $ 180 अर्ब, गत वर्ष भन्दा बढी को खेल र फिलिम उद्योग संयुक्त! पर्व जस्तै Coachella रद्द गरिएको छ, तर लाखौं छन् सकेको भेला गर्न साइबर स्पेस मा खेल Fortnite. पनि राजनीतिज्ञ पश्चिम मा बारी गर्न थालेका छन् वयस्क पीसी खेल अधिक र अधिक पुग्न मतदाता तिनीहरूलाई माध्यम, जस्तै बढ्दो अमेरिकी राजनेता Alexandra Ocasio कोर्टेज गर्ने streamed आफु खेल्न "Among Us.,"एक पटक एक समय मा, राजनीतिज्ञ देखाउन चाहन्थे कसरी हिप र तिनीहरूले सुन्दर छन् र प्रेम सबै जवान मानिसहरू द्वारा प्रेम मा प्रदर्शित संगीत, र अब संगीत द्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ adult PC games.
Covid सुरु गरे यो प्रवृत्ति, तर एकदम intensified, तर लामो अघि संगरोध, adult PC games but what रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय बीचमा मनोरञ्जनका फारम वयस्क मान्छे, को परिणाम आधारित एक अध्ययन गरेर बिहान परामर्श, एक डाटा दृढ सम्बन्धित उपभोक्तावाद, जो देखाए भन्ने विवादास्पद YouTube star PewDiePie, एक Swede जसले प्रकाशित समीक्षा को भिडियो खेल मा आफ्नो च्यानल छ, एक नाम उत्तिकै वा अधिक जानिन्छ, भन्दा भन्न, मेगा बास्केटबल सितारा LeBron जेम्स मानिसहरूको बीचमा को पुस्ता Z., पछिल्लो वसन्त, Adweek एजेन्सी भनेर घोषणा खेल उद्योग संग, $ 138 अर्ब एक वर्ष, surpassed सबैभन्दा प्रसिद्ध अमेरिकी खेल franchises, एनएफएल, NBA, MLB, र NHL संयुक्त । यो सबै culminated मा लेट 2020 जब यो गणना थियो कि भिडियो खेल उद्योग अनुभव राजस्व वृद्धि को धेरै रूपमा 20 प्रतिशत छ ।
खेल थिए कि सबैभन्दा fetishized गत वर्ष थिए Crusader राजा3र दक्षिण पार्क: यो छडी सत्य हो । पनि अभिनेत्री र लोकप्रिय पार्टी केटी लिंडसे Lohan सकेन प्रतिरोध गर्न आवश्यक पोज संग उनको नयाँ adult PC games फोटो मा सामाजिक मिडिया मा पोस्ट. हुनुको मा ध्यान केन्द्र पनि यसको विरोध पक्ष, जो मा देख्न सकिन्छ उदाहरण को सबैभन्दा पूर्वानुमानित blockbuster खेल घटना को वर्ष - भिडियो खेल मास प्रभाव: Andromeda., लामो-घोषणा र प्रचार-खेल खेल संग एक avant-garde ध्वनि विशेषता गीतहरू द्वारा सबैभन्दा प्रसिद्ध कलाकार हाल को वर्ष मा, यस्तो Grimes, Sophie, र एक $ एपी रकी अभिनीत, Keanu रीव्स, लागत, विकास टीम एक अविश्वसनीय $ 317 मिलियन छ । तुलना गरेर, सबैभन्दा महंगा हलिउड फिल्म कहिल्यै छ "अवतार" 2009 देखि, जसको बजेट थियो 478 मिलियन डलर, जो बोल्छ पर्याप्त बारेमा कसरी नजिक उत्पादन बजेट को खेल र सबैभन्दा महत्वपूर्ण फिलिम परियोजनाहरू आउँछन् ।